Uyenza njani inki kunye nombala wemizobo yethu ngeAdobe Photoshop 6rd part | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UAntonio L. Carretero | | Idizayini yeMifanekiso, Uyilo lwewebhu, Izixhobo zoYilo, Photoshop, Tutorials
Siyaqhubeka nesifundo se Uyenza njani inki kunye nombala wemizobo yethu ngeAdobe Photoshop kwinxalenye yayo yesithandathu, apho siza kuqala khona ukufaka umbala kumzobo weerobhothi esiwusebenzisileyo ukuphuhlisa oku tutorial, kwaye siya kuyifumana ekupheleni kwenxalenye yokugqibela esiyibhalileyo, kwimeko apho sifuna ukuyenza ngezinto ezifanayo nezam, endicebisayo xa ndisenza amava okufunda / okufunda endicebisa ukuba atyebise kwaye abe nocwangco. Adobe Photoshop inezixhobo ezininzi ze faka imibala y umthunzi imifanekiso yethu, kwaye kule tutorial Siza kufaka uninzi lwazo ukuze sigqibezele obu buchule endibacebisayo bokufaka inki kunye nokufaka imibala kweyona ndlela igqibeleleyo, sikunike iindlela ezininzi, ngombono wokuba ugcine eyona ilungele iimfuno zakho. Masiye esihogweni.
Ukuba kwi tutorial ngaphambili,Uyenza njani inki kunye nombala wemizobo yethu ngeAdobe Photoshop (icandelo 5), sichaze usetyenziso esiza kulwenza kwezitshaneli kunye nokwenza ukhetho lwamajelo, xa sahlulahlula izinto ezahlukileyo ukuba zifakwe imibala kumzekelo wethu kwaye sizenze sizithiye amagama, ngoku siza kuqala faka imibala kwirobhothi yethu esiyithandayo.
1 Ukuqala ukunika umbala
2 Hue / Saturation
3 Ukuzalisa imibala
4 Imibala yeAdobe Kuler
Ukuqala ukunika umbala
Ukuqala, kufuneka sikwenze Ctrl + Ekhohlo cofa nakweliphi na izithonjana zemijelo ye Iphalethi yesiteshi eziqulathe izinto ezahlukeneyo esizikhethileyo esizenzileyo zezinto eziza kubakho faka imibala. Ndikhethe umzimba uphela kwaye ndikulungele ukuwusebenzisa Faka umbala Uluhlu lweerandi kunye nebrawuni, ngomnwe weorenji. ndiza faka imibala ke ngoku umthunziNangona kunjalo, inokuba nemibala kuqala kwaye emva koko yenziwe mnyama, ayinamdla kule nxalenye yenkqubo.
Singena kwindlela Uhlengahlengiso loMfanekiso-Hue / uMgqibelo, kunye nejelo Umzimba eyona iqulethe ukhetho esiza kulunyanga, kwaye siqala ukongeza umbala kunye nenani lombala esifunayo. Ndicebisa ukuba sidlale ngeenxa zonke ngamaxabiso ahlukeneyo anikezelwa yi Imenyu yezixhobo, de silawule ngakumbi okanye ngaphantsi.
Ukunika umbala kuya kufuneka ushiye ibhokisi icinezelwe Umbala. Emva koko sikhetha imibala kukhetho olwahlukileyo, ijelo ngejelo, de sibe sikwazile ukufaka umbala kunye neethoni efunekayo kuzo zonke izinto zomzobo, ebesisohlule ngaphambili ngamajelo.
Ndincoma obu buchule, ukuzama imibala eyahlukeneyo, enamanqanaba ahlukeneyo, de sifumane le siyithandayo. Ukwenza oku, xa sinomzobo we-inki, uzaliswe mhlophe kwaye ukulungele ukuba umbala, kufuneka siphindaphinde la maleko amatyeli aliqela ukuze sikwazi ukuziqhelanisa nentando.
Enye indlela yokufaka umbala nge Adobe Photoshop, usebenzisa isixhobo Gcwalisa, esendleleni Hlela- Gcwalisa, okanye kwindlela emfutshane yebhodi yezitshixo Shift + F5. Esi sixhobo sisizalisa ngombala esikhetha ukhetho esithe salwenza ngalo mzuzu, ukuqala ngemibala Ngaphambili nangasemva. Nangona ukhetho oludlulileyo lwemibala lukhawuleza kwaye lunika ukugqibezela ukuthanda kwam, ngale ndlela siza kuba nonxibelelwano olukhulu kunye nePalette yeeLale. Zombini zisebenzisa enye okanye enye indlela, sinokusebenza ngokwahlukeneyo kwemibala ekhutshelwe ngqo kwi I-Adobe Kuler, osisicelo se-Intanethi Adobe evelisa amabala ombala, kwaye leyo yeyona ndlela igqibeleleyo elungeleleneyo kuyilo lwethu lonke. Ukuqala ukufaka umbala, kufuneka senze umaleko ongenanto kwifolda yombala, ngendlela eya kuthi eyokuqala ishiye kwaye emva koko uqale ukukhetha ukhetho lwejelo kunye nokufaka umbala, ngendlela yokuba sisebenze kuqala ezona zingaphezulu. ngasemva kwaye ke masinyuke. Kuya kufuneka silayishe imibala esifuna ukuyisebenzisa kwiipelletti ze-swatches kwaye emva koko sikhethe njengoko sizisebenzisa. Ukuqala ukuzalisa, cofa Shift + F5 kwaye faka ibhokisi yencoko yencoko. Sebenza kwimibala kancinci kancinci ukusuka apha.
Imibala yeAdobe Kuler
Sebenzisa iapp I-Adobe Kuler, kufuneka singene kwiphepha le- I-Adobe Kuler kwaye wenze iprofayili kuthi. Emva koko siya kukhetha isikimu sombala kwaye siyigcine ngokunika Gcina, kwaye uyikhuphele kwimenyu yezenzo kwi Ifomathi ye-ASE. Nje ukuba siyikhuphele, ukuze siyisebenzise kufuneka siye kwimenyu yokhetho lwe Iisampulu zePallet kwaye unike ukhetho lokulayisha iisampulu.
Xa ufaka, qiniseka ukuba uhlobo lwefayile esiyifunayo kwibhokisi yencoko yababini yile ASE, Yeyona siyikhupheleyo. Nje ukuba ilayishwe, ukuphela koluhlu lwemibala ye Iisampulu zePallet. Ukusuka apha siya kukhetha imibala esiza kuyinika umzobo wethu.
Kwinxalenye elandelayo neyokugqibela le tutorialNdiza kucacisa indlela yokuwenza umthunzi umzobo wakho ngokukhetha amajelo, aya kuthi aluncedo ekunikezeleni ukukhanya kumzobo ngokulawula umba ngamnye wesithunzi ngasinye, ukongeza kukushiya ifayile enokukhutshelwa ekugqibeleni, apho ngaphandle Iibrashi, amabala okuhamba ngombala okanye PSD, Ndiza kukushiya imifanekiso yesifundo. Sukuphoswa yiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Uyenza njani inki kunye nombala wemizobo yethu ngeAdobe Photoshop (icandelo 6)
IGlyphr, simahla somhleli wefonti kwi-Intanethi